Bacda Muusikada Qalabka
Boorsada Laptop -ka
Boorsada Gacanta & Duffle
Boorsada Sling/boorsada Rasuulka
bac aan biyuhu lahayn
Sixirka dharyada nooleyn kara
Dharka baaba'a leh waxaa loola jeedaa dharkaas oo si fudud oo dabiici ah u burbura si dabiici ah iyadoo la adeegsanayo jeermisyada. Nooleynta noolaha ee dharka waxaa inta badan lagu go'aamiyaa xaddiga kiimikooyinka loo isticmaalo wareegga nolosha ee dharka. Markasta oo la isticmaalo kiimikooyinka, ayay sii dheeraanaysaa in marada si loo hagaajiyo noolaha ...
Bandhigga Canton ee 129 -aad ayaa lagu qaban doonaa onleenka inta u dhexeysa Abriil 15 illaa 24
Bandhigga Canton ee 129 -aad ayaa lagu qaban doonaa onleenka inta u dhexeysa Abriil 15 illaa 24. Bandhigga 129 -aad ee Soo -dejinta iyo Dhoofinta Shiinaha ayaa lagu qaban doonaa onleenka inta u dhexeysa Abriil 15 iyo 24. Sii wadidda qabashada kalfadhiga 129 -aad ee onleenka waxay xoojin doontaa guulaha laga gaaray ka -hortagga iyo xakameynta COVID -19 faafa, iyo sidoo kale bulshada ...
Boorsooyinka Jeermiska Ka Fogeeya
Dadaallada aan ku doonayno inaan ku kaalmeyno dhibaatada Corona-Virus 19, waxaan la shaqeyneynaa Sanitized® oo leh 80 sano si loo horumariyo xalka ka hortagga jeermiska. Waa Maxay Daawada Antimicrobial? Teknolojiyadda ka hortagga jeermiska waxaa lagu qeexi karaa walax ka shaqeysa burburinta ...
Ku Laab Wax Soo Saar
Tan iyo markii ay ku soo laabatay shaqada iyo wax -soo -saarka 10 -kii Febraayo, warshaddeennu waxay billow fiican samaysay bishii ugu horraysay ee ay ku soo laabatay shaqada iyada oo xoogga saartay ka -hortagga iyo xakamaynta iyo horumarinta wax -soo -saarka, iyada oo si joogto ah ay u socdaan amarada macmiilku. Aqoon -isweydaarsiga wax -soo -saarka, goobtu waxay ...
Bacaha Laga Sameeyay Dhalooyinka Caagga Ah
Waa maxay maro dib loo warshadeeyay? Dharka ka samaysan fiilo dabiici ah ama dardaro ah kaliya looma isticmaalo dharka laakiin sidoo kale waxaa loo adeegsadaa guryaha, isbitaallada, goobaha shaqada, baabuurta, sida qalabka wax lagu nadiifiyo, sida qalabka firaaqada, ama duugga difaaca iwm. Haddii dharkaan la kala sooco, la qiimeeyo oo dib loo isticmaalo si ...
Yingbin East Road, Aagga Warshadaha Chengnan, Dalka Hui'an, Quanzhou, Fujian, Shiinaha